धेरै शोधकर्ताहरु आईआरबी को विरोधाभासी विचारहरू लगाउँछन्। एकै ओर, तिनीहरूले यसलाई एक ब्रोकलिंग नौकरशाहीको रुपमा लिन्छन्। यद्यपि, एकै समयमा, तिनीहरू यसलाई नै नैतिक निर्णयको अन्तिम मध्यस्थतालाई पनि विचार गर्छन्। यो, धेरै शोधकर्ताहरू विश्वास गर्न लागेका छन् कि यदि आईआरबी यसलाई स्वीकृत गर्दछ, त्यसपछि यो ठीक हुनुपर्छ। यदि हामी आईआरबीहरूको धेरै वास्तविक सीमाहरू स्वीकार गर्छौं र तिनीहरूमध्ये धेरै छन् (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -यसैले हामी शोधकर्ताहरूले थप जिम्मेवारी लिनुपर्छ हाम्रो अनुसन्धानको नैतिकताका लागि। आईआरबी फ्लोर छ कि छैन, र यो विचार दुई मुख्य प्रभाव छ।
पहिलो, आईआरबी एउटा फ्लोर हो भन्ने अर्थ हो भने यदि तपाइँ एक संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ जसले IRB समीक्षाको आवश्यकता पर्दछ, तपाइँले ती नियमहरू पछ्याउनु पर्छ। यो स्पष्ट लाग्न सक्छ, तर मैले देखेको छु कि केही मान्छे आईआरबीबाट बच्न चाहन्छन् जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा, यदि तपाई नैतिक रूपमा असुरक्षित क्षेत्रहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, आईआरबी एक शक्तिशाली सहयोगी हुन सक्छ। यदि तपाईं उनीहरूको नियमहरू पछ्याउनुहुन्छ भने, तिनीहरू तपाईंको पछि खडा गर्नु पर्छ तपाईंको अनुसन्धान (King and Sands 2015) संग केहि गल्ती गर्नुपर्दछ। र यदि तपाईं उनीहरूको नियमहरू पछ्याउँनुहुन्न भने, तपाईं एकदमै कठिन परिस्थितिमा आफैलाई समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
दोस्रो, आईआरबी एक छत होइन भनेको तपाईंको फारम भर्नु र नियमहरू पछ्याउन पर्याप्त छैन। धेरै परिस्थितिहरूमा तपाईं शोधकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ जो नैतिक रूपमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने बारे जान्दछन्। अन्ततः, तपाईं शोधकर्ता हुनुहुन्छ, र नैतिक जिम्मेवारी तपाईंसँग छ; यो पेपरमा तपाईंको नाम हो।
एक तरीका यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि तपाईं आईआरबी को तल को रूप मा मान्नुहोस र छत नहीं छ तपाईंको पेपर मा एक नैतिक परिशिष्ट शामिल गर्ने छ। वास्तवमा, तपाईं आफ्नो अध्ययन पनि सुरु हुन अघि आफ्नो नैतिक परिशिष्ट ड्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफैलाई बलियो बनाउन तपाईं कसरी आफ्नो साथीहरू र जनतालाई तपाईंको काम व्याख्या गर्ने बारे सोच्न। यदि तपाईको नैतिक परिशिष्ट लेख्दा आफैलाई असुविधाजनक छ भने तपाईंको अध्ययनले उचित नैतिक सन्तुलनलाई हड्ताल गर्न सक्दैन। आफ्नो काम को निदान मा मदद गर्न को लागि, आफ्नो नैतिक अनुच्छेद प्रकाशित गर्न अनुसन्धान समुदाय मा नैतिक मुद्दाहरु मा चर्चा र वास्तविक अनुभव को अनुसन्धान को उदाहरणहरु मा आधारित उचित मानदंडों को स्थापना मा मदद गर्नेछ। तालिका 6.3 अनुभविक अनुसन्धान पत्रहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन मैले अनुसन्धान नैतिकताका राम्रो छलफलहरू गर्छु। म यी छलफलका लेखहरू द्वारा प्रत्येक दावीसँग सहमत हुनुहुन्न, तर तिनीहरू Carter (1996) द्वारा परिभाषित अर्थमा निष्पक्षसँग अभिनय गर्ने सबै उदाहरणहरू छन्: प्रत्येक मामलामा, (1) शोधकर्ताहरूले निर्णय गर्छन् कि उनीहरूले के सोच्ने कुरा सही छ र के गलत छ; (2) उनीहरूले के निर्णय गरेको आधारमा कार्य गर्दछ, व्यक्तिगत लागतमा समेत; र (3) तिनीहरू सार्वजनिक रूपले देखाउँछन् कि उनीहरूको अवस्थाको नैतिक विश्लेषणको आधारमा कार्यरत छन्।
टेबल 6.3: उनीहरूको शोधको नैतिकताबारे छलफलित छलफलका साथ कागजहरू
Rijt et al. (2014) क्षेत्र प्रयोगहरू बिना सहमति
प्रासंगिक हानिबाट जोगिन
Paluck and Green (2009) विकासशील देशमा क्षेत्र प्रयोग
संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान गर्नुहोस्
जटिल सहमति सहमतिहरू
सम्भावित हानिकारक उपचार
Burnett and Feamster (2015) सहमति बिना अनुसन्धान गर्नुहोस्
खतराहरू जोखिम र फायदाहरू खारेज गर्दा मात्रामा गाह्रो हुन्छ
Chaabane et al. (2014) अनुसन्धानको सामाजिक प्रभाव
लीक डाटा फाइलहरू प्रयोग गर्दै
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) क्षेत्र प्रयोगहरू बिना सहमति
Soeller et al. (2016) सेवाको उल्लङ्घन सर्तहरू